Aostralia - Famerenana amin'ny laoniny | Fiaretana haran-dranomasina
Aostralia - Famerenana amin'ny laoniny
Ahoana no nandefasanay 400 Tontalin'ny Coral niverina tany amin'ny Oseana taorian'ny rivodoza iray
Manta Ray Bay, Nosy Hook, Whitsunday, Queensland, Aostralia
Ny vondrona Whitsunday Island dia manohana manodidina ny haavon'ny valan-javaboary 6,000. Io dia iray amin'ireo faritra tena manan-danja sy nampiasaina ao amin'ny Great Barrier Reef Marine ho an'ny fizahan-tany fizahan-tany sy fialamboly. Ny Manta Ray Bay, any avaratry ny Hook Island, dia faritra manan-tantara ho an'ny fizahantany noho ny harambaton'ny ala mikitoantoana, ny toerany ho toy ny tsy mitahiry marin-drano (faritra maitso), ary ny haavon'ny hazandrano lehibe. Ny singa manan-danja amin'ilay tranokala dia lehibe PoritesCoral 'bommies' (kolon-tany lehibe indostrialy) izay manome toerana ho an'ny fahasamihafana be izay ahitana ireo trondro reefatra miara-mitambatra. Tamin'ny 28th of March 2017, ny sakaiza dia tratran'ny rivo-doza mahery vaika Debbie (Category 4; 225-279 km / h rivotra). Niteraka fahasimbana goavana teo amin'ny nosy sy ny toeram-ponenana an-dranomasina izany (anisan'izany ireo vondrom-piarahamonina sy ny foto-drafitr'asa momba ny fizahantany
Loharan-dranomasina lehibe na 'bommies' no natosika ho eny amoron-dranomasina taorian'ny rivodoza Debbie. Bola: Serivisy Parksland sy Wildlife Service
Toerana misy an'i Manta Ray Bay, Whitsunday Islands. Sary © Google Earth
Ny Manta Ray Bay dia teo amin'ny làlana mivantana tamin'ilay rivodoza ary ny habetsahan'ny angovo natolotry ny oram-baratra dia ampy handrodana ny vatoharan-java-bary ary handrodana sy hanosika ny ankamaroan'ireo hara-bato goavana midadasika any amin'ny faritra midadasika. Ireo poritim-pihetsika nasehon'izy ireo dia nihodina tamin'ny haben'ny 0.5 m ka hatramin'ny 2.5 m amin'ny diamondra. Ny fiainana an-davan'andro momba ny haran-dranomasina velona any amin'ny faritra antenantenany no nitranga nandritra ny andro manaraka. Ny fatiantoka ireo jiolahimboto lehibe dia noheverina ho fahaverezan'ny iray amin'ireo lafiny miavaka ao amin'ny Manta Ray Bay ary ao amin'ny toerana misy azy ireo dia mametra ny fidirana amin'ny tora-pasika amin'ny sambo kely.
Queensland Parks and Wildlife Service (QPWS) ary ireo mpiasan'ny Great Barrier Reef Marine Park (GBRMPA), tamin'ny alàlan'ny Programme Management Field (natolotry ny governemanta Queensland sy Australiana), dia nanontanian'ireo mpandraharaha ara-barotra avy amin'ny indostrian'ny fizahantany raha toa ny bommies any Manta Ray Bay dia azo nafindra tany amin'ny tontolo ambanin'ny tany. Ny tanjona ao anatin'ity hetsika ity dia ny hanomezana rafitra ho an'ny famonosana ny olitra any aoriana, hisarika ny trondro, ary hanatsara ny fidirana amin'ny tranokala sy ny hatsarana.
Ny iray amin'ireo loza ara-tontolo iainana fantatra fa ny famindrana ara-batana ireo mpangalatra mavesatra dia hanimba ny vatohara amin'ny lalana. Na dia izany aza, ny fanadihadiana natao tamin'ny alàlan'ny benthic nataon'ny mpiasan'ny QPWS Marine Parks dia nanombana fa ny tranofiara Manta Ray Bay ihany no nanohana ny sivana iray eo amin'ny saribakoly mivantana an'i Debbie. Taorian'izany, nisy ny fanombanana ny tranonkala iray lehibe kokoa izay ahitana ny fiarovana, ny biosecurity, ny fiheverana momba ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana. Ny fikarohana / tombontsoa sy ny fandaharam-panafahana natao dia natao mba hanombanana raha ny famindrana ny bommies no safidy tsara indrindra. Ny vidin'ny tombatombana amin'ny roa andro ampiasaina ny fitaovana fanatodizam-bokatra sy ny sambo fanohanana dia noheverina ho tsy voavaha amin'ny tombontsoa azo ambara: ny famerenana amin'ny toeram-ponenana, ny fampitomboana ny aesthetics sy ny fidirana an-dalamby mankany amin'ny toerana malaza, ny fidirana amin'ny toeram-pivarotam-bahoaka, ny fitomboan'ny fahatakarana ny haran-dranomasina fanangonam-bokatra sy fampisehoana ny fitantanana mavitrika taorian'ny hetsika fisehoan-javatra mahery vaika.
Nisy fanapahan-kevitra noraisina natao mba hanohy ny soso-kevitra hamindrana ny vatohara ho miverina eo ambanin'ny marika ambany ambany miaraka amin'ireo tanjona voalaza etsy ambony: (1) mitombo ny substrate izay ahafahana manangona ny harena voajanahary amin'ny hoavy sy ny habakabaka hanohanana ny trondro sy ny zavamananaina hafa , ary (2) fanatsarana ny haitao sy ny fidirana amin'ny Manta Ray Bay Beach. Raha vao nifanaraka ny habetsahan'ny asa, ny GBRMPA dia nanampy tamin'ny fanomezana alalana haingana ho an'ny governemanta (QPWS) araka ny Fizarana 5.4 ao amin'ny Planet Zoning Plan 2003 (Plan Zoning). Ity ampahan'ny drafitra Zoning ity dia ahafahan'ny GBRMPA manaiky, na manome alalana ny antoko fahatelo hanajanona, hetsika fitarihana manokana ho azy ireo. Ity fizarana ao amin'ny Plan Zoning ity dia nampiasaina bebe kokoa mba hanampiana ny fitantanana ho famerenana amin'ny laoniny haverina amin'ny laoniny ary haverina amin'ny asa fanarenana indray ary ny programa famerenana amin'ny laoniny.
Ny mpikaroka mahery vaika be mpahita sy ireo mpanamory fiara fitaterana enta-mavesatra dia niroso mba hamerina hamerina indray ireo bombe hiverenana any amin'ny faritra manjavozavo amin'ny alàlan'ny familiana azy ireo eny ambonin'ny vatohara amin'ny alàlan'ny tondra-drano. Navoakan'ny mpitrandraka ala 30 avy eo mba hanosehana ireo jiolahim-boto manakaiky ny haran-dranomandry sy ny hantsana amin'ny fampiasana ny tombo-kase folo metatra ny fitaovam-piaviana. Mba hanamafisana ny sehatr'asa ao amin'ny tranokala ambany, dia nampiasaina ny entana iray mitondra takaitra efatra taonina miaraka amina tavoahin-tsakafo mba hanosehana ny korontan-trano sy ny lantom-pivarotana madinika ho any amin'ny faritra manasaraka ny vatohara. Ny fanaraha-maso ny fitsaboana rehetra momba ny fanodikodinana ny tany (alohan'ny hamafàna entana sy ny tranonkala), ny tetikasa sy ny asa eo an-toerana dia notarihan'ny mpiandraikitra ny QPWS Marine Park. Nandritra ny roa andro (20-21 June 2017), dia novaina ny rano Xanumx metatra kilaometatra maty (mitovy amin'ny taonina 100 eo ho eo) no napetraka tao anaty rano ambanin'ny fetran'ny rano ambany.
Ny mpitaingina fiara fitaterana enta-madinidra sy mpitrandraka vita amin'ny alàlan'ny fanangonam-bokatra dia nampiasaina mba handehanana sy hamerina indray ny haran-dranomasina hiverina ao anaty rano mandritra ny rivo-doza. Sary © Queensland Parks and Service Wildlife
Ny fanaraha-maso ny valin'ny tranonkala dia nokarakarain'ny mpiasan'ny QPWS tamin'ny 4 August 2017 izay nampiseho fa ireo bombe dia azo antoka sy azo antoka ho an'ny hetsika anaty rano. Taorian'io dia nanomboka nitsidika indray ireo tranonkala mpizahantany mpizahatany, izay namaritra ny fambolena trondro izay ahitana sekolim-pokontany lehibe, trondro matanjaka be sy be trondro ary karazana trondro.
Fandinihana an-tsokosoko - (16 volana aty aoriana)
Mba hanombanana ny vokatra momba ny tontolo iainana sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanavaozana ireo jiolahy, dia nanao fanadihadiana ara-tontolo iainana haingana ny mpikaroka avy amin'ny Oniversite James Cook tamin'ny Oktobra 2018, manodidina ny 16 volana taorian'ny nanorenana azy ireo. Ny tanjon'ny fanadihadiana an-dàlana dia ny hamantatra ny fonon'ireo vatohara velona sisa tavela amin'ny bommie tsirairay, ny habetsaky ny fanoratana ny vatohara ho an'ireo bombe, ary ireo trondro izay nifaneraserana amin'ireo bombe.
Toeram-ponenana voapoizina. Sary © Queensland Parks and Service Wildlife
Ho an'ny fanadihadiana momba ny haran-dranomasina, ny bommie tsirairay dia noraisina ho singa samihafa samihafa (replicace). Ny fitambaran'ny totalin'ny vatohara velona sisa tavela dia nofinofy ho an'ny bommie tsirairay. Ny valan-javaboahary tanora rehetra (mpitsoa-ponenana) izay niorina tamin'ny bommies hatramin'ny Jona 2017 (eo anelanelan'ny 1 cm sy 15 cm amin'ny savaivony) dia fantatra amin'ny haavony.
Ireo bombe rehetra nodinihina dia be dia be Porites sp. zanatany. Ny kely indrindra amin'ireo bommies dia manodidina ny 1 m ny savaivony ary ny lehibe indrindra dia 2.5 - 3 m ny savaivony. Ny hazandrano dia nohadihadiana tamina zana-kazo 120 m izay nihazakazaka teo akaikin'ny bommies, nanomboka tamin'ny bommie 349 ary nifarana tamin'ny bommie 363 (sary 6). Ny trondro rehetra izay nifanerasera tamin'ny bommies, ary tao anatin'ny faritra mirefy 4 m manodidina ny transect (ny velaran'ny fanadihadiana dia 480 m2), dia voarakitra amin'ny karazany avokoa.
Ny vatoharan-dranomasina sisa tavela amin'ny bommies navadika
Ny ankamaroan'ireo mpandala ny fanadihadiana (16 avy amin'ny 22, 73%) dia nanana ny vatan'ny vatohara velona tany am-boalohany. Ny fonon'ireo vatohara velona sisa tavela eo amin'ny bommie tsirairay nohadihadiana dia avy amin'ny 0-20%, ary midika ho an'ny ampamoaka rehetra amin'ny 5.9% (± 1.6%). Betsaka tamin'ireo bombe no teo amin'ny toeran'ny fihemorana (tampony) tamin'ny fotoana nanaovana fanadihadiana. Mety efa nisy vatam-paty fanampiny mbola tavela raha toa ka naverina tamin'ny toerany tsara ireo bombe. Porites sp. Ny kolonialina dia afaka mamelona amin'ny famokarana an-tsokosoko ireo polipaly sisa tavela, ary hampitombo ny firafitry ny taolam-paty sy ny famerenana amin'ny laoniny ny maty, raha toa ka tsy simban'ny macroalgae na ny fikambanana hafa.
Azo atao ny mivoatra sy mandrakotra ny faritra maty ao amin'ireo zanatany ireo rakotra sisa tavela amin'ny vatan'ny vatohara ho an'ireo mpizarazara. Ny tahan'ny sisa tavela amin'ny fivarotana velona dia miovaova, ary misy fiantraikany amin'ny toe-javatra marobe, anisan'izany ny kalitaon'ny rano, ny tahan'ny alim-pitomboana sy ny fihenan'ny vatohara amin'ny trondro reefatra, ny fanelingelenana ny hoavy toy ny harena mangatsiaka, ny lozam-pifamoivoizana na ny rivodoza, ny fametrahana ny vatohara ho an'ny ny ampahany maty amin'ny bombe ary ny fitomboana sy ny fielezan'ireo zanatany vaovao ireo. Ny fanadihadiana amin'ny ho avy ho an'ireo bombe navadika dia tokony ahitanao ny tombantombana momba ny sisa tavela amin'ny ampahany sisa amin'ny sisa Porites Ny vatan'ny haran-dranomasina tsirairay avy amin'ireo bombe.
Fandinihana ny fananganana korontana vaovao. Sary © David Williamson
Famerenana ny Coral ho an'ireo bommies navadika
Tokony ho ny iray ampahatelony (8 avy amin'ny 22, 36 isan-jato) ireo mpandala ny fanadihadiana dia nanangona 1 farafaharatsiny hamerina ny fanjanahantany. Ny bommies efatra dia nanana vatosoa roa farafaharatsiny ary indro ny iray tamin'ireo bommie dia nahazo mpitsoa-bato enina. Ny Coral indray dia mihodina amin'ny haben'ny 3 cm ka hatramin'ny 15 cm amin'ny diamondra. Amin'ny ankapobeny, dia nisy karazana folo karakarazara nanoloana ireo zanatany voafidy ary tafiditra ao Acropora, Pocillopora, Cyphastrea, Favia, Favites, Goniastrea, Psammocora ary Hydnophora. Noho ny fisamborana ireo bombe tamin'ny volana june 2017, ary iray monja ny fotoana fanalana ny vatohara dia efa nodimandry talohan'ity fanadihadiana fototra ity, dia namporisika ny hanangona ny fisian'ny karazana karazana hodi-biby manerantany amin'ny bommies. Azo inoana fa hisy ny fitomboan'ny zanabola voakasika, ary ny famerenana indray ny vatohara ho an'ireo mpifanolobodirindrina, raha mbola mitohy ny fepetra tsara mandritra ny vanim-potoana mionona mandritra ny fahavaratra sy any aoriana. Ny fanadihadiana amin'ny ho avy an'ireo bombe nohavaozina dia tokony ahitàna ny fepetra faran'izay bitika indrindra amin'ny kolon-dranomasina rehetra voarakitra izay mitombo eo amin'ny bommies.
Coral recruits hita ao amin'ny bommies haran-dranomasina apetraka indray. Sary © David Williamson
Harin-trondro mifandraika amin'ireo bommies navadika
Karazam-borona roa karazana avy amin'ny valizy valo no voarakitra ao amin'ny sehatra tokana amin'ny alalan'ireo bombe navadika. Ny karazana trondro dia ny Acanthuridae, ny Chaetodontidae (lolozy), ny Labridae (wrasses), ny Lutjanidae (snappers), ny Pomacanthidae (ny hazandrano), ny Pomacentridae (fiompy), ny Scaridae (parrotfishes) ary ny Siganidae (ny bitro). Ireo mpifaninana dia ny vondron'olona be mponina indrindra, miaraka amin'ny planktivorous Neopomacentrus bankieri Ny karazana be karazan-javamaniry sy ny herbivore teratany Pomacentrus wardi ny karazany faharoa. Fikarakarana karazan-trondro voa, indrindra Acanthurus grammoptilus, Siganus doliatus ary Scarus rivulatus dia notazonina am-pilaminana tamin'ireo bombe naverina napetraka sy teo amin'ny manodidina. Trondro maromaro nohazavaina tamin'ny tranga rehetra notsongaina tamin'ny 22. Na dia nitombo be aza ny sisin-dranon'ny algôma tao amin'ny faritra maro tamin'ny vatohara bomie bommie, dia hita fa nitatra ny fitomboan'ny tohodrano algôn ny habetsaky ny tsindry hazokely amin'ny trondro vato. Ankoatr'izany, tsy nisy macroalgae notazonina tamin'ny fitomboan'ny bombe naverina na ny trano fisakafoanana manodidina ny Manta Ray Bay.
Amin'ny ankapobeny, tokony heverina fa ny fanavaozana ny Porites Bommies nafindra tany Manta Ray Bay nandritra ny rivo-doza Debbie dia nanolotra tombontsoa ara-tontolo iainana sy sosialy. Naverina teo amoron-dranomasina indray ny fidirana an-tseranana, ny vatoharan-damba sisa tavela amin'ny ankamaroan'ny bommies dia voatahiry, nanomboka ny fanjanahana ny bommies amin'ny alàlan'ny vatohara ary ny toeram-ponenana dia natsangana ho an'ny trondro reef. Ankoatr'izany, ireo bombe dia manome trano fonenana misy rihana telo dimanjato ao amin'ny vatan'ny vatohara ivelany, ary rehefa mitombo ny fiaraha-monina ao am-bala, ary betsaka ny trondro mifandray amin'izy ireo, dia hihatsara ny traikefa an-dranomandry ho an'ny mpizaha tany.
Manoro hevitra izahay fa ny tsirairay amin'ireo bombe eny amin'ny vatohara any Manta Ray Bay dia ho marihana amin'ny endriny ary ny faritra azo henoina araka ny tokony ho izy amin'ny fampiasana ny GPS, ny sarin'ny satelita ary ny GIS software. Izany dia ahafahana manamarina mazava tsara ny bommie tsirairay ary manamora ny fanarahamaso ara-tontolo iainana matanjaka ny faritra. Ho azo atao ihany koa ny manara-maso ny hetsiky ny jiolahimboto aorian'ny fisehoan-javatra mahery vaika.
Manoro hevitra ihany koa izahay fa ny fanadihadihana amin'ny ho avy ho an'ireo bombe dia tokony atao amin'ny loha-hevitra mitovy amin'io ho an'ny fanadihadiana (2 - 3 m eo ambony LAT), ary amin'ny vanim-potoana mitovy amin'izany (Oktobra na Novambra).
Satria ny ankamaroan'ireo bombe nopotehina dia teo amin'ny toerana niova (ambony), hetsika famerenana amin'ny laoniny hiverina amin'ny famerenana indray ny fifindra-monina Porites Ny bommies dia tokony hiezaka ny hampifanaraka tsara ny bandy. Ny fampisehoana mety dia mety hanatsara ny fahasitranana amin'ny vatan'ny vatohara sisa.
Tokony hanohy hitantana ilay banga ho toy ny 'toerana tsy misy vatofantsika' amin'ny fikojakoan'ny vahoaka. Izany dia hampihena ny mety hampidi-doza ny fahasimbana amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Ity tranonkala ity dia mety ho azo ampiasaina amin'ny famerenana ny teknika famerenana amin'ny fitrandrahana coral (ohatrinona ny fanamafisana ny lokony, 'fambolena koray') mba hampihenana ny fahasitranana.
Ny fotoana dia tena zava-dehibe amin'ny fikatsahana ny fitomboan'ny fiatrehana ny fiantraikany eo amin'ny fiantraikany eo amin'ny fiompiana voajanahary. Eny, haingana kokoa ry zareo afaka averina amin'ny laoniny, tsara kokoa!
Ny fanombantombanana ny fiantraikany eo amin'ny sehatra dia singa manan-danja amin'ny fandefasana fankatoavana ny fanatanterahana ireo asa.
Ny Manta Ray Bay dia ao amin'ny 'Green Zone' an'ny GBR ary noho izany dia voaaro amin'ny fanerena angatra. Ny karazam-bozaka maniry sy ny trondro dia mety hampiroborobo ny fahasimban'ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fijanonan'ny ala sy ny macroalgae izay mety hifaninana amin'ny toerana. Ny fanaraha-maso ny haavon'ny fivoaran'ny macroalgee amin'ny bommies dia tokony ampahany amin'ny fanaraha-maso isan-taona.
Ity tetikasa ity dia novatsiana tamin'ny alàlan'ny famatsiam-bola (State / Commonwealth) ho an'ny fahasalamana natao ho an'ny Cyclone Debbie. Ny fandaniana manontolo ho an'ny asa fanatrehana (famolavolana tetezana, serivisy entana sy asa) dia manodidina AU $ 30,000. Ny vidin'ny fandalinana fanaraha-mason'ny fanaraha-maso dia nitarika ny 16 volana taorian'ny bommie fanavaozana asa dia manodidina ny $ 4500. Ity fanombatombana ity dia nomena amin'ny hatsaram-pahefan'ny ARC Center of Excellence momba ny Fianarana momba ny Harena an-dranomasina, James Cook University, amin'ny fampiasana ny vola avy amin'ny programa fandaharam-potoana fandraketana amin'ny Reef 2050 Integrated Monitoring and Reporting (RIMReP). Ny famaranana ity tranga ity dia nanohana tamim-pahazotoana tamin'ny TropWATER, James Cook University ary nanangom-bola tamin'ny Programan'ny Nosy Water Environment Tropical Water Quality.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoQueensland Parks sy ny Wildlife Service
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSarintanin'ny Great Barrier Reef Marine Park
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPrograman'ny Siansa momba ny tontolo iainana momba ny tontolo iainana, Tobin-drano Tropical